Telesom + Somtel + Dahabshil ee adeegyada kala duwan bixiya siday Buuraha Libaaxley ugu liseen macaash ugumay hambayn Deg.Boon ee libaaxley ka tarisantahay. Dr.khadar | Cadceed newssite
Friday, January 6th, 2017 | Posted by admin
Telesom + Somtel + Dahabshil ee adeegyada kala duwan bixiya siday Buuraha Libaaxley ugu liseen macaash ugumay hambayn Deg.Boon ee libaaxley ka tarisantahay. Dr.khadar
XOG: War la hel-yaaba tallo la hell-yaa!! waa taayir ka mid ah taayirada nolosha wareejiya/roga adeegyada bulshada loogu hagar baxo ee isgaadhsiinta ( Telephones + Internet ) iyo xawaaladaha lacagaha ka ganacsada.
Waxa aan u soo taagnaa iyada oo dalka oo dhan ( fooniye iyo adeega baafinta kuyuu iyo safaf loo galo si bulshadii dagaaladii sokeeye kala firdhiyeen u wada xidhiidho ), wax-yar uun ka dib 1997 waxa soo ifbaxay awooda dihin ee macaash ee ku jirta suuqa adeega isgaadhsiinta ; dadaalo iyo tashi dheer oo rag hawl-carnimo iyo tacab badan tamar galiyey ayaa waxa mar-kaliya isbadaley in laga guuro hanaankii isgaadhsiineed ee ( fooniyaha ) oo mudo dheer lagu soo tanaaday.
Waxa bog-furmay waa cusub iyo casri wata adeegyada isgaadhsiineed ee dhinacyada badan leh ee muraad-qumiyo bulshadooyinka ( somaliland + puntland + somalia) adeegyadaasi oo ay haakah iyo hab-beel kula tanaaday.
Adeegyadan casriga ah ee baahida iyo hamuunta joogtada ah loo qabo waxa ay inooga yimaadaan ( Djabouti ) ( isla sidaada signalka iyo dhambaalka sida adeega loo baahanyahey uga soo baxo khadka laynka aan isticmaalno ee lagu badhaadhay ee Djabouti waxa ugu horeyn soo danab qabta signals kaasi biraha dhaadheer ee dulsaaran silsilada buuraha libaaxley gaar ahaan (kuraha cabdile ) cabdile celi ee ka tirsan degmada Boon ee gobolka Salal ka dibna ay u soo gudbiyaan somaliland + puntland + somalia ).
MUCDA: biraha buuraha libaaxley u dul yaala dhamaan shirkadaha bixiya adeegyada badan ee kala duwan ee bulshada nolosha u fududeeyay . biraha buuraha libaaxley shirkadaha u saaran waa bar u-nuga guusha macaashka hantida badan, daaraha dhaadheer ee magaalo walba ka dhisan iyo hindisaha laaca guulaha mustaqalka dhaw iyo ka fogba.
Haynta iyo badhaadhaha shirkadahan oogadooda wey ka muuqataa rabi ha u siyaadiyo , hayntoodu waata sababtay in ay ka qayb-qaataan daryeelka kaabayaasha dhaqaale ee bulshada, shirkadahani waxa ay ka qayb-qaataan waxtarka dhisme iyo dhaqaaleba leh ee ay u fulinayaan dhamaan bulshooyinka iyo deegaamada kala duwan ee ( Somaliland + puntiland + somalia).
( Hayeeshee degmada BOON oo saaran kaabiga buuraha libaaxleyda guulaha iyo macaashka badan horseeday ayaa ka aradan oo ka awdan waxtarka iyo waxqabadka ay shirkadahani dad iyo deegaan kastaba oo dalka ku yaal uga mudnayd degmada BOON.
Magaalada boon xaqa iyo xuquuqda ay shirkadahan kulaheyd uu aasanyahey illaa maanta, hadii dadka deegaanku wanaag awgeed gaabsadeen ; mulkiilayaasha iyo dhamaan hawl-wadeenada shirkadahaasi macaashdoonka ah ma’aysan garan ( abaal celinta degmada boon iyo dadka deegaanku ku lahaayeen ).
BOON MAXAY U BAAHANTAHAY ?!!!.
Qof shaqo la siiyo iyo mid afka loo buuxiyo oo reer boon libaaxley ah waa mahad illahey hayeeshee dan shakhsiyeedku nooc uu yaheyba waxa ka weyn oo ka gada sareeya waxa dadka wada deeqa iyo danta guud ee dadweynaha reer boon iyo libaaxley oo ay uga fadhiyaan shirkadahan macaashdoonka ah in ay wax ka taraan oo wax ka qabtaan karaankooda aasaasiyaadka degmada boon u baahantahey oo ah :
dhisme cusbitaal oo degmada boon u baahantahey.
Gaadhi ambalaas ah oo loogu adeego dhawr iyo tobbanka tuulo ee hoos yimada degmada boon oo dhamaantood ku wareegsan qorfaha silsilada buuraha libaaxley.
Dhismaha iskuulka farsamada gacanta iyo qalabkiisii oo ay wax ku bartaan reer boon.
Dhismaha saldhiga booliska degmada boon.
Dhismaha sariibad iyo saylad xoolaad.
Dayr lagu soo wareejiyo dugsiyada hoose/dhexe iyo dugsiga sare.
Dhismaha garoonka kubada cagta .
Dhismaha 2 qol iyo suuli loo sameeyo ciidanka istabta magaalada boon jooga.
Borama waa magaalada labaad marka hargaisa laga yimaado dakhliga soogala shirkadaha telesom ; somtel iyo dahabshiil muhiimad weyn bay ugu fadhidaa guud ahaan gobolada awdal iyo salal .
Siday horayba iskaga indhatireen shirkadahani iyo kuwa kale ee birohoodu buuraha libaaxley ugu taagan yihiin sabab macaash oo iyaga dan u ah hayeeshee macaashkaasi , guulaha iyo barwaaqooyinka ay gaadheen shirkadahani degmada boon aaney la wadaageyn ( waa bar kuma taal arintaasi).
Waxa laga rabaa shirkadahan in ay wax buuran oo la arki karo ku soo celiyaan degmada boon ee xukunta libaaxleyda birahoodu dul saaranyihiin ee guusha iyo badhaadhaha u horseeday .
Buuraha Libaaxley reer boon faan bay u tahey , shirkadaha birahoodu saaranyihiina faan bay u tahey !! guul iyo badhaadhe dheeraad ah ayaan indiin rajaynayaa dhamaan shirkada, farxada reer boon waa indinka oo waxka qabta 8 da qodob ee kor ku xusan oo dhamaan tood ah baahiyaad aasaasiya.
Tani waa dhambaal iyo fariin ku sigaar ah ugu socda maamulka shirkadaha birahoodu buurta libaaxley saaranyihiin ee degmada boon , maamulkaasi oo ah mid heer gobol waa gobolka awdal iyo maamulka guud ee shirkadahaasi xarumahoodu yihiin ( Borama iyo Hargaisa ).